Col. Dalbac oo wata batalyan ciidan ah, kuna hubaysan 12 gawaarida dagaalka ah oo ka goostay Somaliland. – Radio Daljir
Col. Dalbac oo wata batalyan ciidan ah, kuna hubaysan 12 gawaarida dagaalka ah oo ka goostay Somaliland.
Buuhoodle, Feb 09 – Col. Axmed Maxmed Dalbac oo ka mid ah saraakiisha sare ee ciidanka Somaliland ee ka dagaalamayey gobolka Cayn ayaa isu dhiibay ciidanka deegaanka ee gobolka Cayn.
Col. Dalbac oo ay weheliyaan batalyan ciidan ah (240+ askari), kuna hubaysan 12 gawaariga dagaalka ah ayaa ku macneeyey goosashadiisa in ay sabab u ahayd gardarada, dulmiga, iyo xasuuqa ay ciidanka Somaliland u gaysteen shacabka gobolka Cayn.
Mar uu la hadlay shacabka magaalada Buuhoodle ayaa uu ugu baaqay ciidanka Somaliland in ay ka baxaan gobollada Sool, Sanaag & Cayn, isaga oo sidoo kalena ugu baaqay shacabka gobolku in ay difaacaan deegaanka, isna uu ka qayb qaadan doono difaaca; waxaa uu intaa ku daray in uu ku faraxsan yahay in uu yimaado Buuhoodle, shirar wadatashi ahna uu la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo shacabka magaalada Buuhoodle.
Col. Dalbac waxaa uu ka mid ahaa saraakiisha fara ku tiriska ah ee u dhashay gobollada Sool, Sanaag & Cayn ee ka tirsanaa ciidanka Somaliland ee ka dagaalamayey gobolka Cayn.
Ma aha sarkaalkii ama siyaasigii ugu horeeyey ee ka goosta ama u goosta Somaliland, balse waxaa ay goosashadiisu badaleysaa miisaanka ciidan iyo dagaal ee gobolka oo dhawrkii bilood ee la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Zakariye Maxamed Cumar,